Oromo News 05.14.21 | KWIT
Ammati talaalin Pfizer’s kan Covid-19 nama umriin isaa wagga 12 fi sanii ol tae kan kennamu jalqabe akka tae himan. Doctor Iowa akka jedhanitti warrii gariin gaafa akka qaban ibsanii jiru. Dr. William Ching pediatric hospitalist kab Unity Pointy Health St. Luke’s hospitala Cedar Rapid keessa dalagu hime jira. Haga inni talaalichi fayyaadha jedhette, ijoole baayen fudhatani jiru. Akka jedheti, ijoole sochii isaani kan qaraatti akka deebian himan. Akka innijedhetti ijoolen talaali corona virus kan fudhatan, virus kan hin qabamne yoo tau akkasumas midhaa baayele hin qabu.
Deparmantiin hospitaala Iowa har’a akka gabaasanitti guyyaa namni corona virus due 5 yoo tau haarawa kan qabame ammo 305 akka tae himan.
Woodburry County keessati namni guyyaa har’a qabame 3 dha.
Barataa University Iowa Mollie Tibbetts kan ajjeese jedhame himattame irrati ummani himannaa akka dhaqanii hordafuu danda’an himan, garuu qaamani miti jedhan. Sababa Covid-19 irra hordafuudha abaan murti Joel Yates akka jedheti ummanni fi warri miidiya sababa dhukkuba kanaa mana murti Cristhian Bahena ti akka hordafuu hin dandeenne hime.
Garuu warri oduu himu camera fagoo kan jalqaba irraa hanga dhumaati mullisu ummani internaati fi television akka laaluf akka qopheesu danda’an himan. Rivera guyyaa wiyaxata himannaa ajjeecha tokkofaadhad kan dhihaatu jedhee niyaadama jedhan. Barataa University Iowa kan tae bara 2018 manaa isaa Brooklyn Iowa fiigichaaf bahe kan achumaan dhahameedha.
Oromo News 05.12.21
By Fatiya Adam • May 12, 2021
Governor Kim Reynolds akka jetteti state Iowa garee Republican kan hojattootaf sababa dhukuba kanaa birraa isaani dabalu keessa akka seenu heddu himte.
Reynolds akka jetteti ol kaa’insaa federal kan fixu ta’a, birria hoji dhabdoota torbaan nitti $300 kennamu dabalate.
Reynolds akka jetteti birrin kun akka ummani dalagaati hin deebine dhoogu jira fi dinaagdee state illee akka gad buusa jiru himte.
Faayidaaleen kunis June 12 kan sutu ta’a.